हलिउड-बलिउड | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
अंगदान गर्ने अमिताभ बच्चनको घोषणा, फ्यानहरूको यस्तो प्रतिक्रिया !
बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनले रिलमा मात्रै होइन रियलमा पनि नायककै छवि बनाएका छन् ।
बजरंगी भाइजानकी मुन्नीमा ५ वर्षमा यस्तो परिवर्तन, कहाँ व्यस्त छिन् अहिले ?
हर्षाली मल्होत्राले बाल कलाकारको रूपमा आफ्नो करियरको सुरूआत सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाइजानबाट गरेकी थिइन् ।
दुई महिनाअघि कोरोना संक्रमित भएका चर्चित गायक बालासुब्रमण्यमको निधन
भारतका चर्चित गायक एसपी बालासुब्रमण्यमको शुक्रबार मृत्यु भएको छ ।
‘कास्टिङ काउच’ र ‘न्युडिटी’ बारे बेधडक बोल्ने शर्लिनको सदाबहार सेक्सी अवतार (फोटो फिचर)
भारतीय फिल्मी क्षेत्रकी एक अभिनेत्री शर्लिन चोपडा ‘कास्टिङ काउच’ र ‘न्युडिटी’ बारे बारे बेधडक खुलेर बोल्ने अभिनेत्रीका रुपमा परिचित छिन । यस बारे आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पात्रहरुको स्पष्ट चित्रण नगरे पनि परिस्थितिजन्य विषयका बारेमा अनुभव शेयर गर्न कत्ति पनि हिच्किचाउँदिनन् ।
जनावरका लागि भारतीय अभिनेताले गरे जीप दान
एजेन्सी । भारतीय अभिनेता जोन इब्राइमले जनावरका लागि आफूले प्रयोग गर्ने गरेको जीप दान गरेका छन् । जनावरका लागि काम गर्ने एनिमल म्याटर्स् टु मी (एमटिएम) संस्थाका लागि यी अभिनेताले आफ्नो मनपर्दो जीप दान गरेका हुन् ।
नायक सुशान्त मृत्यु प्रकरणसंग जोडिएकी अभिनेत्री रिया पक्राउ
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंहको मृत्युसंगै खुलासा भएको ड्रग्स प्रकरणमा भारतीय अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पक्राउ परेकी छिन । भारतको नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसीबी) ले रियालाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
ट्वीटका कारण भारतीय नायिका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी
एजेन्सी । भारतीय नायिका कंगना रनौत विरुद्ध मुम्बईमा एक सामाजिक अभियन्ताले उजुरी दिएका छन् । मुम्बई प्रहरी, महाराष्ट्र प्रान्त, भारतीय फिल्म उद्योग र त्यससँग सम्बन्धित मुद्धामा विवादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनी विरुद्ध मुद्धा परेको हो ।
निया शर्माले जितिन ‘खतरों के खिलाडी–मेड इन इन्डिया’ को उपाधि (फोटो फिचर)
भारतीय टेलिचलचित्रकी अभिनेत्री निया शर्माले स्टंटमा आधारित भारतीय टेलिभिजन (रियलिटी) शो ‘खतरों के खिलाडी–मेड इन इन्डिया’ को विजेता बनेकी छिन ।
उर्वशीको ग्ल्यामरस् ब्यायाम पोज (फोटो फिचर)
बलिउड नायिका उर्वशी रौटेला अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छिन । विश्वब्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको प्रकोपले फिल्मी क्षेत्रमा खासै ब्यस्त नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा उनको ब्यस्तता र चर्चामा कुनै कमी आएको छैन ।
बलिउड अभिनेता संजय दत्त फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित
बलिउड अभिनेता संजय दत्तलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको पुष्टि भएको छ। डाक्टरहरुका अनुसार उनको क्यान्सर चौथो चरणमा पुगिसकेको छ।
जाह्नवी कपूरको हट अवतार (फोटोफिचर)
बलिउड अभिनेत्री जानभी कपुर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छिन । सामाजिक सञ्जालमा शेयर भएका हट फोटोहरुका कारण जानभी चर्चामा रहेकी हुन ।
बलिउड अभिनेता संदय दत्त अस्पताल भर्ना
बलिउड अभिनेता संजय दत्त अस्पताल भर्ना भएका छन् । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएर विरामी परेपछि उनी लीलावती अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् ।
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनको परिवार कोरोना संक्रमण मुक्त भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय मौनिका (फोटो फिचर)
भारतीय टेलिभिजन अभिनेत्री मौनी रोय पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय देखिएकी छिन । आफ्ना तस्विरहरु ईन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्ने क्रम बढाएसंगै सामाजिक सञ्जालमा रोयको सक्रियता बढेको हो ।
अमिताभ बच्चनले जिते कोरोना !
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
शाहरुख पुत्री सुहानाको फोटो सुटको शौख (फोटो फिचर)
बलिउडका किंग खान अर्थात सुपरस्टार शाहरुख खानकी छोरी सुहाना जवान भैसकेकी छिन । उनले फिल्मी क्षेत्रमा डेब्यु नगरेको भए पनि सोसल मिडियामा अधिक चर्चा कमाइसकेकी छिन ।
श्वेता पुत्री पलक हिरोइन बन्दै (फोटो फिचर)
भारतीय टेलिभिजन सेलिब्रिटी अर्थात हिन्दी टेलिसिरियलकी अभिनेत्री एवं विग बोस–४ कि विजेता श्वेता तिवारीकी छोरी पलक तिवारी बलिउडमा प्रवेश गर्दैछिन ।
ऐश्वर्या राय र उनकी छोरी कोरोना मुक्त !
बलिउड अभिनेत्री तथा पूर्वमिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन र उनकी छोरी आराध्या कोरोना मुक्त भएका छन् ।
अस्पतालमा के गर्छन् 'कोरोना पोजेटिभ' अमिताभ बच्चन ?
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
बेइजिङ । कोरोनाको त्रासका कारण महिनौदेखि बन्द रहेका चीनका चलचित्र हलहरु फेरी खुल्न थालेका छन् । सोमबार चलचित्र हेर्नका लागि धेरैले टिकट काटेको चिनियाँ चलचित्र अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । हल सञ्चालन गर्न र टिकट काट्न अधिकारीहरुले अघिल्लो हप्ता सूचना जारी गरेका थिए ।
कोरोना असर : ट्याक्टर चलाउँदै सलमान खान ! (भिडियो)
बलिउड सुपरस्टार सलमान खान कोरोना कहरले निम्त्याएको फुर्सदमा किसान बनेका छन् । सलमान पनवेलस्थित आफ्नो फार्महाउसमा ट्याक्टर चलाउँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
बाहुबलीस्टार प्रभास र दिपिका एउटै चलचित्रमा !
प्रभास र बलिउडकी चर्चित नायीका दिपिका पादुकोणले सँगै काम गर्ने भएका छन् ।
यी हुन् संसारकै सबैभन्दा अग्ली रुसी मोडल : हेर्नुस् तस्बिर
एक्टेरियाको उचाईँ ६ फुट ९ इन्च छ भने खुट्टाकोमात्रै ४ फुट ३ इन्ट रहेको छ । लामो खुट्टाका कारणले उनलाई फ्लाइटमा बस्न समस्या हुन्छ भने गाडीमा पनि निहुरिएर मात्र बस्न मिल्छ । जुत्ता चप्पल पनि कम्पनीमै पुगेर नापो दिनुपर्छ । सामान्य व्यक्ति भन्दा दुई गुणा उनी छिटो पनि हिँड्ने गर्छिन् ।
फुटबलर डेविडकी हुनेवाली बुहारीको फोटो भाइरल
ईङ्ग्ल्याण्डका चर्चित फुटबलर डेविड बेकहमको घरमा यतिखेर खुसीको माहौल छाएको छ । उनका जेठा छोरा ब्रुकलिन बेकहमको विहे हुन लागेका कारण सिंगो घर परिवारमा खुसी छाएको हो ।
कोरोना संक्रमणका कारण बलिउड अभिनेत्री रेखाको घर सिल
बलिउड अभिनेत्री रेखाको मुम्बईस्थित घर सिल गरिएको छ । उनकाे सुरक्षा गार्डमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले रेखाको घर सिल गरिएको हाे ।
भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनमा काेराेना देखियाे, अस्पताल भर्ना
भारत । भारतीय सिने हस्ती अभिताभ बच्चनलाई काेराेना भाइरसकाे संक्रमण पाेजेटिभ देखिएकाे छ । बच्चनलाई शनिवार राति मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनले आफैंले ट्वीट गर्दै काेराेना पाेजेटिभ भएकाे जनाएका हुन् ।
धान रोप्दै फरक अवतारमा सलमान, लेखे यस्तो..
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको महामारीले धेरै कलाकारहरुको पेशामा प्रभाव परेको छ । महामारीमा नेपाली कलाकारहरु पनि विभिन्न क्रियाकलापका साथ आफ्ना तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्ने गरेका छन् ।
पुराना फोटोहरु पोस्ट गर्दै दीपिकाले भनिन्, आफैं सम्झिनु पर्छ कि आफ्नो यात्रा कहाँबाट शुरु भयो
एजेन्सी । वास्तवमा यो कुरा नेताहरुमा लागू हुने हो । चप्पलबाट शुरु भएको राजनीतिक यात्रा वातानुकुलित कार र घरमा बिताउन थालेपछि पुराना दिनहरु बिर्सिने गरेका छन् ।
भारतीय हास्य कलाकार जगदिपको निधन भएको छ । क्यान्सर रोगले पीडित ८१ वर्षीय जगदिपको बुधबार राती मुम्बईस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हाे ।
एजेन्सी । बाहुबली अभिनेता प्रभासको आगामी फिल्म ‘प्रभास–२०’को फस्ट लुक सार्वजनिक हुने भएको छ । यो फिल्म अब रिलिजको तयारीमा रहेको छ । आगामी फिल्म निर्माताहरुले उनको यो फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
क्याट्रिना क्याफ भारतीय चलचित्र उद्योगकी स्थापित नायिका हुन । उनी बलिउडमा जति चर्चित र सफल छिन, फेसन सेन्सका हिसाबले पनि उत्तिकै अब्बल मानिन्छिन ।उनले हालै मात्र आफुलाई विकिनी लुक्समा सार्वजनिक गरेकी छिन ।
सुशान्तसिंह राजपूतको सुसाइड मामिला नयाँ मोडमा पुगेको छ । आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोपमा कानुन व्यवसायी सुधीर कुमार ओझाले बलिउडका चार स्टारसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् ।
बलिउडका प्रसिद्ध अभिनेता जैकी श्राफकी छोरी एवं अहिलेका चर्चित अभिनेता टाइगर श्राफकी बहिनी कृष्णा श्राफ यतिखेर ब्वाइ फ्रेण्डसंगको मस्तीमा डुबेकी छिन ।
बलिउड नायिका शिल्पा सेट्टीले आज आफ्नो ४५ औँ जन्मदिन मनाउँदै छन् । सन् १९७५ जुन ८ तारेखमा जन्मिएकी उनी सन् १९९३ देखि निरन्तर बलिउडमा सक्रिय छन् । सन् १९९३ को बाजिगरबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी उनले एकपछि अर्को गर्दै सफलता प्राप्त गरेकी थिइन् ।
सुन्दर अनुहार र हट फिगर भएपनि ईण्डस्ट्रीमा खासै जम्न सकिनन् अदा शर्मा । अभियन र नृत्यको शौखिन अदालाई पहिलो फिल्ममा दर्शकले निकै रुचाए पनि दोस्रो फिल्म हिट हुन सकेन ।